Araka ny Baiboly, “raha hoy isika : tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika” (1 Jaona 1.8).
Raha azonao tsara ireo zavatra rehetra ireo, dia aoka ianao hitsahatra amin’ny hadalanao ka hanaiky fa Jesoa Kristy irery no làlana mankany amin’Andriamanitra. Izy rahateo no efa nilaza hoe: “Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alàlako” (Jaona 14.6). Aoka ho fantatrao koa fa “raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena ianao” (Romana 10.9). Hoy koa ny Baiboly hoe: “Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy” (Romana 10.11). Amin’izay fotoana izay ianao dia ho afaka hiaina an’ity teny fampanantenàn’i Jesoa Kristy ity, manao hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo; ny fiadanako no omeko anareo” (Jaona 14.27). Azo antoka tokoa io fampanantenana io satria “ny rany (ran’i Jesoa) teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana” (Kolosiana 1.20).
Editeur : BPC- La bonne semence. France Réf. SV 501 MA
Avy amin’ny savorovoro
ho amin’ny fiadanana